Abti-doon “Beenaale Beenaale” Waxaa Yidhi, Taageer Kooxda Jwxo-shiil – Rasaasa News
Jun 20, 2011 Abti-doon “Beenaale Beenaale” Waxaa Yidhi, Taageer Kooxda Jwxo-shiil
San Diego, June 18, 2011 [ras] – War naga soo gaadhay San diego, California, ayaa sheegay in shalay oo Sabti ahayd uu maskiin Maadeey dambcay in uu been hafro afar uu Jwxo-shiil u sheegay in ay shir u qabtaan, si ay u helaan beentii boggaga internetka.
Sida aanu warka ku helay Abti-doon oo booqday Abtiyaashiis oo degan San Diego, ayey qaar ka mid ah taageerayaasha kooxda uu ku jiro ee Jwxo-shiil, damceen in ay shir u qabtaan.
Sida aynu la socono kooxda Jwxo-shiil, ayey dadweynaha degaanka Somalidu aad u neceb yihiin kuna baraarugeen waxa ay yihiin, kuwaas oo haatan noqday Tuke Cambaar leh.
Hadaba, maalintii shalay ahayd ayaa waxay damceen in ay shir ku qabtaan meel qarsoodi ah oo magaalada ka fog. Run ahaantii lagama warhaynin in ay iyaga laftigoodu isarkayaan, dad ay la shiraan daaye.
Kolkii uu shirku u furmay ee ay in yar oo xantii magaalada ah isu tuur tuureen, ayaa cod baahiyaha ay ku soo dhaweeyeen Abti-doon, kolkii uu cabaar wax aan jirin akhriyey ayaa waxaa shirkii ka dhax kacay oday caan ka ah magaalada San Diego, oo ka tirsan kooxda Jwxo-shiil.
Odayga ayaa ku dhawaaqay “beenaale beenaale” waxaa yaabay oo ku soo booday qaar iyaga oo is yidhi mahala odaygu wuu xanuunsanayaa maadaama dadka meesha fadhiyeyba ay u badnaayeen Odayaal xanuusan.
Odaygii ayaa mar labaad ku qaylyey “ma waali waan fayoobahay, car waakii i taabta,” “beentii waan ogaaday, mar dabe walee in aydaan cidna been u sheegin.”
Waxaa naloo sheegay in ay odaygii Boolis ugu yeedheen, odaygiina waxaa uu u yeedhay wiilshiisii oo u dhaartay Abti-doon. Qolkii shirka ayaa qaylo isu badalay Abti-doon iyo wadaad ay Ilmo Abti yihiina way careen.
Wararka ayaa sheegaya in kooxdii shirka soo abaabushay oo dhamaantood ah dad qoran in ay waalan yihiin oo lahayo ayaa feedh isku bilaabay iyaga oo leh “hebel baryahan waan ka shakisanaa iyo adigaan anigu kaa shakisanahay.”
Dhacdadan San Diego Sabtidan ka dhacday waxay markhaati u tahay, in kooxda Jwxo-shiil, beenteedii hada ay iyaga dhexdoodu isfahmeen. Odaygan ayaa ahaa dadka ugu ololaha badan Kooxda Jwxo-shiil, waxaana la garan la yahay in ay jiraan isag dad kale oo ay kooxda ku wada jireen iyo in uu kaligii yahay.
Wariyaha ayaa noo soo gudbiyey magacyada qaar ka mid ah dadka lagu hayo hoyga dadka waalan ee hadana kooxda la shaqeeya;
Ali xareed- oo ah nin la hayo
Jawhar Raab i- nin lahayo
Ahmed Ali yusuf – ma fayooba.
Xukun Ciise – balwadle.
Abti-doon oo ay dadkani shirka u soo qaban qaabiyeen ayaa isaga oo aan arkin ka dhoofay San Diego.
War Deg-Dega: Ma Dhabaa in Cabdi Cabdulahi Xalay Xakawda Laga Jaray?